पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरीलाई कसले राख्यो यौ’न प्रस्ताव ? फेसबुकबाट गरिन यस्ताे खुलासा, देशभर हंगामा — Imandarmedia.com
पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरीलाई कसले राख्यो यौ’न प्रस्ताव ? फेसबुकबाट गरिन यस्ताे खुलासा, देशभर हंगामा
काठमाडाैं । छिमेकी मुलुक भारतमा अनेक घटनहरु घट्ने गर्छन, जजसले सबैलाई अच्चम्मित पार्रहेको हुन्छ । हालै मात्रै भारतका पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक ब्यक्तिले अ’श्लिल मेसेज पठाएपछि हंगामा मच्चिएको छ । भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जकी छोरी शर्मिष्ठा मुखर्जीलाई प्रथा मण्डल नामका ब्यक्ति अ’श्लिल मेसेज गरेका हुन् ।
इनबक्समा त्यस्तो मेसेज देखेपछि शर्मिष्ठाले पहिले त ति ब्यक्तिलाई ब्लक गर्ने अथवा इगनोर गर्ने बिचार गरेकी थिइन् । तर चुप बस्दा अन्यलाई आफुलाई जस्तै तनाव दिन सक्ने हुँदा सामाजिक सञ्जाल मार्फतनै सार्वजनिक गर्ने बिचार गरिन् । त्यसपछि उनले अ’श्लील म्यासेज पठाउने व्यक्तिको म्यासेज नै सार्वजनिक गरिदिइन् ।
भारतकै गुवाहाटीमा एउटा निकै दर्दनाक तथा अनौठो घटना भएको छ । एकजना युवकले मोबाइल चार्ज गर्ने २ फिट लामो चार्जर केवल आफ्नो यौ’नांगबाट भित्र छिराए । त्यो चार्जर केवल उनको लिंगबाट भित्र छिरेर मुत्रथैलीमा पुग्यो ।
यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिंगमा चार्जर केवल छिराएपछि अत्ताल्लिएका ती युवक रन्थनिँदै अस्पतालमा पुगे । तर डाक्टरसँग उनले साँचो कुरा बताएनन् । आफुले चार्जर केवल मुखबाट निलेको भन्दै उनले डाक्टरसँग बताए ।
डाक्टरहरुले पनि उनले भने बमोजिम चेकजाँच गरे । दिसा परीक्ष र इन्डोस्कोपी लगायतका जाँच गर्दा समेत डाक्टरहरुले उनको पेटमा निलेको भनिएको तारको कुनै संकेत फेला पारेनन् । तरपनि डाक्टरहरुले उनको पेटको शल्यक्रिया गरे । तथापि शल्यक्रिया गरी पेट चिरेर हेर्दा समेत पेटमा कुनै केवल फेला परेन ।
त्यसपछि उनको शल्यक्रिया कक्षमै पेटको सबै भागको एक्सरे गरियो । जब डाक्टरहरुले एक्स रे रिपोर्ट हेरे तब उनीहरु तिनछक परे । उनले निलेको भनिएको केवल उनको पेटमा थिएन, त्यो उनको मुत्रथैली भित्र थियो । ३० वर्षका ती युवकले आफुले चार्जर केवल निलेको भनेर ढाँटेका रहेछन् । डाक्टरहरुले त्यसपछि तत्कालै उनको मुत्रथैलीबाट उक्त तार बाहिर निकालिदिए । उनको शल्यक्रिया सफल भएको र अहिले स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको बताइएको छ ।
उनको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरका अनुसार ती युवक युरेथ्रल साउन्डिङ भनिने यौ’न सम्बन्धी मनोरोगबाट पीडित रहेछन् । यो मनोरोग भएका मानिसहरुले आफ्नो यौ’नांगबाट विभिन्न खाले तरल तथा ठोस पदार्थहरु भित्र छिराएर मैथुन गरी यौ’न आनन्द प्राप्त गर्ने गर्दछन् । ती युवक चार्जर केवल छिराएको पाँच दिनपछि मात्र पेट दुख्यो भन्दै अस्पताल गएका छन् ।
डाक्टरहरुका अनुसार यो मनोरोग एक दुर्लभ मनोरोग हो । तथापि यस्ता घटना बेला बेलामा भैरहन्छन् । ती युवकले निकै चरम व्यवहार देखाएका कारण यौ’नांगबाट चार्जर केवल छिराएर मुत्रथैलीमै पूराएको डाक्टरको भनाई छ ।
घरेलु कामदार खोज्दै राजदरबार, कति छ, वार्षिक तलब सुन्दै चर्कित
विश्व कीर्तिमान राख्न निधारमा सिङ, जीउमा साढे ४०० प्वाल
अपरेशन सफल, दिदीबहिनी दाजुभाइ बनेर घर फर्किए
भूतसँग प्रेम सम्बन्ध, काे हुन् यी युवती
वार्षिक तलब ६० लाख, बिस्कुट चाख्ने गज्जबको जागिर कुन देश
दुनियाको सातौँ आश्चर्य, मात्र १ जना पर्यटकका लागि खोलियो
सुन भन्दा महँगो किन हुन्छ ह्वेलको बान्ता
६५ वर्षीया महिलाले १४ महिनामा ८ बच्चा जन्माइन्
निकै अनौठा कुराहरु,यी पुरुषले किन गरे सर्पसँग बिहे
भ्यागुता बचाउन, सडकमा खटिन्छन् स्वयंसेवी